Mahadhooyinkii Dagaladii Faqashta WQ-Axmed Wali Xiis Cabdi (Ducaysane) | Haqabtire News
Mahadhooyinkii Dagaladii Faqashta WQ-Axmed Wali Xiis Cabdi (Ducaysane)
Waxa uu Yiri waxa aan ka qaxnay dagalkii dib u xoreynta dalka ee lagula jirey dawladii milatariga, waxan NAFTA ULA cararnay dhankaa iyo dawlad deegaaneedka somalida , hanti masidano ,wax naga horeeyana garamayno lakinse waxan larooreynaa sidan u badbaadin lahyn nafahayaga.
waxan Guure kaga baxnay magalada Burco xili saqbadh ah, qoyskayagii waxan ku tashanay in midkayaba meel maro annaga oo ka cabsi qabnay in meel lanagu wada dilo , Alleh mahadii wax dhib ah namaysoo gaadhin lakinse qoysas badan oo aan jaar ahayn ayaa qudha meel lagaga wada jaray qaar dhawac aney noloshooda kasoo kabanayn la gaadhsiiyey hadaad joogi lahayd axmadaw runtii murugo,naxdin iyo ciil ayaad u dhiman lahayd . Isaga oo hadkii siiwata waxa uu Yiri
“waxan gaadhey magalada daroor oo kutaal dawlad deegaaneedka somalida ,noloshu wey adkeyd oo waxa lagayabaa in aan wax cunno sadexda xili hal xili oo ka mid ah, noloshu aad ayey u adkeyd” Waxan weydiiyey su’al ahayd maxaa mankaga iyo maskaxdaada ka guurin xiligii aad joogtey magalada daroor?
Inta uu qosley ayuu yiri sxb waxan ilabi Karin Aniga iyo nin aan saxiib nahay oo iminka raga ugu tijaarsan somaliland ah nasoo kala dhex martay.
Mudo gaadheysa 2 bilood ayaanan meel sanuunad (suugo) taalo anan arag , maalin malmaha ka mid ah ayaa nin isiiyey daasad ay Ku jirto suugo bisil , waxan markiiba maskaxda Ku qabtay waxan sugadan Ku cuni lahaa waxan u tagay saxibkay oo an Ku iri war xafadiina ina gee bal in aan ka helno laxoox aan suugadan Ku cuno.
Gurigoodii ayaan tagnay dasadii suugadaa la furey Ku darsoo daasadu ma weyna , waxa lasoo dhigey laxoooxdii, saxiibkey waxa uu u yeedhey dhamman xafadooda wixii joogey , anigii shalay mooyeee doraad ayaa ciil kala wareegey , ninkeygii dhammaa ee islahaa aad cuntid suugo waxa igusoo hagaagay hal hudhmo (cantuugo) oo suugadii ah .
Lasoco sheekooyin kaleh.